Interviews Archives » Page 8 of9» Myanmar Peace Monitor
မေး။ ။ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ထဲမှာ KNPP ပါဝင်လာခဲ့တဲ့ သမိုင်းကြောင်းလေး ရှင်းပြပေးပါ။ ဖြေ။ ။ငြိမ်းချမ်းရေးက သမိုင်းကြောင်းပြောရင်တော့ တော်တော်လေးကိုကြာပါပြီ။ ၁၉၇၃ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းလက်ထက်ကတည်းက ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ကတည်းက ရန်ကုန်အထိ ဆွေးနွေးဖို့သွားခဲ့တာ။ နောက် ၉၃/၉၄ ဦးခင်ညွန့်လက်ထက်တုန်းကလည်း တစ်ခါ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၉၅ခုနှစ်မှာ သဘောတူညီချက်တွေ သုံးလလောက်ပဲရပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ပျက်သွားတယ်။ ၂၀၁၀/၂၀၁၁ ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ရောက်လာတော့ ပြန်စတာပေါ့။ ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုကတော့ အမြဲတမ်းပါဝင်တယ် ပြောလို့ရပါတယ်။
ကချင်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ KDP ပါတီ ဥက္ကဌ ဦးကွမ်ကရောင် အောင်ခမ်း နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
ကချင်ပါတီပေါင်းစည်းရေးဟာ ၅ ကျော်ကြိုးစားခဲ့ရာ ယခု “Kachin State Party” KSP ပါတီအဖြစ် ပါတီ ၄ ခုမှ သဘောတူ အတည်ပြုပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ပေါင်းစည်းရေး ခရီးစဉ် သမိုင်းနှင့် လက်ရှိ အခြေအနေ အပြင် ရှေ့ဆက်သွားရမည့် မူဝါဒ ရေးဆွဲရေး ကဏ္ဍများအထိ KNG က တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။
“ဘယ်လိုပဲ ပစ်နေခတ်နေတိုက်ခိုက်နေကြပါစေ နောက်ဆုံးတစ်နေ့ နိုင်ငံရေးစားပွဲဝိုင်းမှာ အဖြေရှာကြရမှာ ဖြစ်တယ်” နိုင်ဟံသာနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင်လုံ(တတိယအစည်းအဝေး) အပြီး ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းများအပေါ် သုံးသပ်ချက်များကို မွန်ပြည်သစ်ပါတီ NMSP ဒုဥက္ကဌ၊ ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC ဥက္ကဌ၊ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှုပူးတွဲကော်မတီ UPDJC အဖွဲ့ဝင် “နိုင်ဟံသာ” အား မွန်သတင်းအေဂျင်စီအယ်ဒီတာ ဗညားအောင် မွန်ဘာသာဖြင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်ကို မြန်မာဘာသာသို့ အနီးစပ်ဆုံးပြန်ဆိုထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ကရင့်အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနား တားဆီးခံရမှု ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်နှင့် မေးမြန်းခြင်း
“ဒီလိုလုပ်တာဟာ လူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို စော်ကားတာနဲ့ တူတူပဲ။ ကရင်တစ်မျိုးသားလုံးကို စော်ကားတာ ဖြစ်တယ်။ ဒီဟာကတော့ ဒီအကျိုးဆက်ကို သူတို့ တာဝန်ယူရလိမ့်မယ်။”
လက်ရှိပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအပေါ် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီ AMDP ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် “ဒေါက်တာဗညားအောင်မိုး”၏ အမြင်သုံးသပ်ချက်များကို မွန်သတင်းအေဂျင်စီ အယ်ဒီတာ ဗညားအောင် ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ မေး-ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၁ ရာစုပင်လုံ တတိယအစည်းအဝေးမှာ သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တဲ့အချက် ၁၄ ချက်ဟာ နိုင်ငံရေးနဲ့ လုံခြုံရေးကဏ္ဍတွေမှာ သိပ်အရေးပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေမဟုတ်ဘူးလို့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ ထောက်ပြပါတယ်။ ဒီလို သိပ်ပြီးအရေးမပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံမှာ မဆွေးနွေးဘဲနဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ ပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကပဲ ဆွေးနွေးအတည်ပြုပေးလို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆရာ? ဖြေ-မဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ ဒါက အခြေခံဥပဒေကိစ္စပါ။ လက်ရှိလွှတ်တော်အသီးသီးမှာဆိုရင် NLD အမတ်က အများစု ဖြစ်နေတယ်၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံအပေါ် သဘောထားအမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး NLD ပါတီ ဘယ်လောက် နားလည်ထားသလဲ? ဘယ်လောက်လက်ခံထားသလဲ? လက်ရှိ NLD ကျင့်သုံးနေတဲ့ ပေါ်လစီတွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဥပမာ မွန်ပြည်နယ်က တံတားကို […]